The CMS ကိုမအပြစ်မတင်ပါနဲ့၊ Theme Designer ကိုအပြစ်တင်ပါ Martech Zone
The CMS ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့၊ Theme Designer ကိုအပြစ်တင်ပါ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 22, 2012 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 24, 2020 Douglas Karr
ဒီမနက်မှာငါဖောက်သည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလားအလာရှိတဲ့ဖောက်သည်တစ်ယောက်ကိုဖုန်းခေါ်တယ် အထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာများ။ သူတို့ဝဘ်ဆိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်တွေ့ဆုံနေကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ငါသူတို့မပြီးသားဖြစ်ကြောင်းခေါ်ဆိုမှုမတိုင်မီသတိပြုမိခဲ့သည် WordPress သူတို့ကဆက်လက်သုံးပါမလားဟုမေး၏။ သူမသည်ဟုပြောသည် လုံးဝမဟုတ်ဘူး အရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ သူမလိုချင်တဲ့ဆိုဒ်ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒီနေ့ Expression Engine မှာတိုးတက်လာမယ့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့စကားပြောနေတယ်။
ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးကြောင်းရှင်းပြခဲ့ရသည် Expression အင်ဂျင် အတော်လေးကျယ်ပြန့်လွန်း။ Joomla နဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒရူးပယ်လ်, စျေး, Imavex နှင့်အခြားအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များတစ်အိမ်ရှင်။ အချို့သော CMS စနစ်များသည်ရှာဖွေခြင်းနှင့်လူမှုရေး၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအသုံးချရန်နူးညံ့သောမေတ္တာပါသောဂရုစိုက်မှုလိုအပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ CMS စနစ်များသည်မျှမျှတတဖန်တီးထားခြင်းခံရသည်ကိုအမှန်တကယ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းဖြင့်သာခွဲထားသည်။
ဒီ client သည်သူမလိုချင်တာကို WordPress တွင်ပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောလိုသည်။ ပြနာမှာ WordPress မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သူမ၏ဆောင်ပုဒ်ကိုထွင်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သောဖောက်သည်တစ် ဦး မှာ VA ချေးငွေပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာကုမ္ပဏီကောင်းတစ်ခုပါ။ စစ်မှုထမ်းဟောင်းကိုလှူဒါန်းသည့်အခါတိုင်းဝါရင့်အလှူဒါနများကိုလှူဒါန်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှာ WordPress ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်သုံးစွဲသူတစ် ဦး သည် WordPress တွင်မည်သည့် CMS နီးပါးတွင်လှပသော၊ အကောင်းဆုံးနှင့်အသုံးဝင်သောဆိုဒ်ရှိနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်သည်။ WordPress သည်ယခုအချိန်တွင်အလွန်လူကြိုက်များသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အခြားသူများထက်ထိုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ပိုမိုအလုပ်များနေသည်။
VA Loan သည်စိတ်ကြိုက်အခင်းအကျင်းတစ်ခုကို ၀ ယ်ယူခဲ့ပြီးနောက်သူတို့၏ရှာဖွေမှုနှင့်လူမှုရေးဗျူဟာများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုငှားခဲ့သည်။ ခေါင်းစဉ်သည်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘေးဘားများ၊ မီနူးများသို့မဟုတ်ဝစ်ဂျက်များမသုံးပါ။ WordPress လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများကိုအသုံးမပြုဘဲ element တိုင်းသည်သူတို့၏ template တွင် hard-coded ကြသည်။ ကျနော်တို့လာမည့်လစုံတွဲသည်ဆောင်ပုဒ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း, ပေါင်းစပ်နေခဲ့ရသည် ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အား Form များ Leads360 နှင့်အတူ၊ သူတို့၏ဘဏ်တွင်၎င်းတို့၏ဘဏ်မှပြသရန်နောက်ဆုံးပေါ်အပေါင်ခံနှုန်းထားများကိုပြန်လည်ထုတ်ယူသည့်ဝစ်ဂျက်တစ်ခုကိုပင်တီထွင်နေကြသည်။
ဤသည် theme ဒီဇိုင်းနာများနှင့်အေဂျင်စီများနှင့်အတူစနစ်တကျပြproblemနာဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုလုံးကိုကြည့်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာသူတို့နားလည်တယ်၊ ဒါပေမယ့် client ကနောက်ပိုင်းမှာလိုချင်တဲ့အင်္ဂါရပ်အားလုံးကိုထည့်သွင်းဖို့ CMS ကိုအပြည့်အဝဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာမသိဘူး။ ငါ Drupal, Expression အင်ဂျင်မြင်ကြပြီ လွတ်လပ်မှု AccrisoftCMS ကြောင့်မဟုတ်ဘဲလှပပြီးအသုံး ၀ င်သော MarketPath ဆိုဒ်များမဟုတ်ပါ။ သို့သော်အဓိကအကြောင်းအရာကိုတီထွင်ခဲ့သောကုမ္ပဏီသည်ရှာဖွေခြင်း၊ လူမှုရေး၊ ဆင်းသက်ခြင်းစာမျက်နှာများ၊ ပုံစံများစသည်တို့ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့် CMS အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုပေါင်းစည်းရန်လုံလောက်သောအတွေ့အကြုံရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လိုအပ်တယ်
ကောင်းသောဆောင်ပုဒ်ဒီဇိုင်နာတစ် ဦး လှပသောဆောင်ပုဒ်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်သောဆောင်ပုဒ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်သည်သင်နောင်လာမည့်နှစ်များတွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတီထွင်လိမ့်မည် (နှင့်နောင်တွင်အလွယ်တကူပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်) ။ အဆိုပါ CMS ကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့, အဓိကဒီဇိုင်နာအပြစ်တင်!
သင့်ကိုယ်သင် Swag အကောင့်တစ်ခုရယူပါ
22:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 3, 51 တွင်
ခေါင်းပေါ်မှာ လက်သည်းခြေသည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် WordPress ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရောဂျက်များ၏ 90% ကောင်းကောင်းကို ဖော်ဆောင်ထားပြီး၊ ဤကဲ့သို့သော မှတ်ချက်များနှင့် “အင်း၊ မလုပ်နိုင်ဘူး __________” ကဲ့သို့သော အရာများကို သင်ကြားရမည့်အချိန်များရှိပါသည်။ မည်သည့် မှန်ကန်သော တုံ့ပြန်မှုမှာ ဖြစ်သည်၊ " အကယ်၍ သင့်လိုအပ်ချက်များ (theme နှင့်/သို့မဟုတ် plugins) နှင့် ကိုက်ညီသော အပြင်တွင် တစ်စုံတစ်ခု မရှိသေးပါက၊ သင်၏ developer မှ API ကို အသုံးပြုပုံကို သိပါက၊ သင် လုပ်ချင်သည့် အရာတိုင်းကို လုပ်နိုင်သည် ။ အချိန်နဲ့ ဘတ်ဂျက်ရှိသရွေ့ ဟိုမှာ။”
သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဖောက်သည်သည် "အသစ်" တစ်ခုခုအပေါ် ၎င်းတို့၏စိတ်ဆန္ဒရှိသောကြောင့် သင်သည် ၎င်းကို လှည့်စားသည် သို့မဟုတ် ၎င်းကို ငြင်းပယ်နိုင်သည်။
23:2012 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 10, 08
အဲဒါစိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ Reusser Design တွင် အလုပ်စလုပ်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အချိန်၌ အများအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော WordPress မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်ထားသော CMS၊ EE တွင် အလုပ်လုပ်ရန် အဓိကပြောင်းခဲ့သည်။ ခြားနားချက်အားလုံးကို ပြုလုပ်ထားသည့် ကျွန်ုပ်၏ WP အပြင်အဆင်များတွင် သင်သဘောတူပါသည်။ ဥပမာ၊ WooTheme ၏ Canvas အပြင်အဆင်ကဲ့သို့ တစ်စုံတစ်ခုသည် အတွင်းတွင် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး အလုပ်လုပ်ရန် အလွန်ကောင်းမွန်သည်၊ အပြင်တွင် ဆိုးရွားသော အခြား "ပရီမီယံ" နှင့် စိတ်ကြိုက် အပြင်အဆင်အချို့လည်း ရှိနေပါသည်။
“ဘလော့ဂ်ရေးခြင်း” သည် ဦးစားပေးမဟုတ်သည့်ကိစ္စများတွင် ဝဘ်ဆိုဒ်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် EE ကို အလွန်နှစ်သက်ပါသည်။ ရိုးရှင်းပါတယ်၊ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး WP ထက် ပိုကြံ့ခိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ သို့တိုင် သင်သည် သင်၏ CMS တွင် စာရေးခြင်း သို့မဟုတ် ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းများစွာ ပြုလုပ်သောအခါ၊ ထိုစာရေးဆရာအတွက် WP ၏ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို မည်သည့်အရာမျှ မကျော်လွန်ပါ။
28:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 10, 26 တွင်
@awelfle:disqus EE နဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျွန်တော် နည်းနည်းတော့ မိုက်ပါတယ်၊ MVC developer တွေအတွက် ပိုသေချာပါတယ်။ အဲဒါကို စိတ်ထဲနဲ့ပြောရရင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာ နည်းနည်းပိုဖော်ရွေပြီး ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုဖြစ်ပြီး ပြဿနာအများကြီးမဟုတ်ကြောင်း နားလည်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တရားဝင် developer တစ်ယောက်အနေနဲ့ မထင်ထားတာကြောင့်၊ အများကြီးတွေးစရာမလိုတဲ့ လွယ်ကူတဲ့အရာတွေနဲ့ စွဲစွဲမြဲမြဲ ဆုပ်ကိုင်ထားတတ်တယ် (ဒါပေမယ့် ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ပိုပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။)
28:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 4, 54 တွင်
ဤဆိုက်သည် TwentyEleven ၏ မွမ်းမံထားသော ဗားရှင်းဖြစ်ပုံရသည်။ ဒါပဲလား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းမှန်တယ်။ CMS မဟုတ်ပါ။ သို့သော် WordPress၊ IMHO သည် ယခုအချိန်တွင် လုပ်ဆောင်ရန် အကောင်းဆုံး ပလပ်ဖောင်းဖြစ်သည်။
28:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 56 တွင်
မျက်စိကောင်းတယ် @jonschr:disqus ! ၎င်းသည် အလွန်ပြုပြင်ထားသော TwentyEleven ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်… ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ် ဆုတ်ဖြဲပစ်လိုက်ပါသည်။ အပြင်အဆင်အမည်များအားလုံးကို ဖုံးကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ မတတ်နိုင်ပါ။ ပြီးတော့ @Wordpress: လူကောင်းတွေကို သူတို့ ထိုက်တန်တဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ဖယ်ရှားပေးတာကို သဘောကျတယ်။
28:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 9, 40 တွင်
သိချင်စိတ်မရှိနဲ့- ဒီဖိဒ်ကို ဆွဲထုတ်ထားတဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့် HTML ဆင်းသက်တဲ့ စာမျက်နှာကနေ ဒီကို ရောက်ခဲ့တယ်။ အဘယ်ကြောင့် ၎င်းတို့ကို တိုက်ရိုက်မပေါင်းစည်းသနည်း။ အဲဒါက ကျွန်တော့်အတွက် WordPress ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ဆွဲဆောင်မှုတွေထဲက တစ်ခုပါ။ သင်ရွေးချယ်သည့် အတိုင်းအတာအထိ မတူညီသော စာမျက်နှာပုံစံများ။
28:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 10, 24 တွင်
မင်္ဂလာပါ @jonschr:disqus – ဆင်းသက်တဲ့စာမျက်နှာ ဘယ်မှာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုကဲ့သို့သောဆိုဒ်များသို့ လင့်ခ်များကို ဖြန့်ချိပါသည်။ http://www.corporatebloggingtips.com ဒါပေမယ့် အသွားအလာကို အရင်းအမြစ်တစ်ခုတည်းကို ပြန်အာရုံစိုက်စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ဤနေရာတွင် အသွားအလာအားလုံးကို နှစ်သက်သည်၊ ဤဒိုမိန်း၏ အခွင့်အာဏာကို တွန်းအားပေးပြီး မည်သည့် လင့်ခ်များကိုမဆို ဤဒိုမိန်းကို ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များဖြင့် နောက်သို့ တွန်းပို့ကြောင်း သေချာပါစေ။ သင်ဆိုလိုသည်မှာ မျှော်လင့်ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် ဒိုမိန်းများစွာတွင် ထုတ်ဝေပါက၊ ထိုအခွင့်အာဏာကို ခွဲထုတ်နေပါသည်... အားနည်းသော ဆိုဒ် 1 ခုထက် ခိုင်မာသောဆိုဒ်2ခု ရှိချင်ပါသည်။
29:2012 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 12, 16
ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါတစ်ခုပဲ။ ဟမ်။ အဓိပ္ပာယ်ရှိပါ… သို့ဆိုလျှင် အဘယ်ကြောင့် “ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာ” ကို ဤဆိုက်၏ အညွှန်းစာမျက်နှာအဖြစ် အဘယ်ကြောင့် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မဖော်ပြသနည်း။ မည်သည့်ပြစ်မှုမျှ ရည်ရွယ်ချက်မရှိ၊ အားသာချက်က ဘာလဲဆိုတာ သိချင်ရုံပါပဲ။ ဆင်းသက်တဲ့စာမျက်နှာကို BTW ကြိုက်တယ်။ အရမ်းသဘောကောင်းတာပဲ။
29:2012 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 8, 46
@jonschr:disqu လုံးဝမပြစ်မှားပါဘူး။ ဒါ WordPress ဆိုက်တစ်ခုဆိုတာ သိလိုက်ရလို့ အံ့သြသွားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေမှာ မြင်နိုင်တဲ့ အတွင်းပိုင်း စာမျက်နှာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ စာအုပ်ထွက်ရှိစဉ်တွင်၊ စာအုပ်အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသော စာမျက်နှာဆိုက်တစ်ခုရှိရန်မှာ သာမာန်ဖြစ်သည်။ "ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ရေးခြင်း" အတွက်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသော ဒိုမိန်းတစ်ခု ရှိချင်ပြီး ၎င်းသည် အတော်လေး အလုပ်လုပ်ပါသည်။ အကြောင်းအရာကို ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် မကြာခဏ အပ်ဒိတ်လုပ်လိုသော်လည်း အခြားသော ဘလော့ဂ်ကို လုံး၀မရေးချင်တော့ပါ - ထို့ကြောင့် ဖိဒ်၊ လူမှုဆက်ဆံရေးကို ဆွဲယူကာ ၎င်းကို အဖြစ်အပျက်ပြက္ခဒိန်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ၎င်းကို အမြဲပြောင်းလဲစေသည်။ ၎င်းသည် ဝေါဟာရများစွာအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော အဆင့်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အတွက် စာအုပ်များကို ဆက်လက်ရောင်းချခဲ့သည်။